Zvese nezve kites - Ikkaro
kudzidziswa >> Kites
Zvinyorwa, mavhidhiyo, zvinongedzo uye zviwanikwa pane akasiyana marudzi ekiti uye mashandisiro avo.
Static, acrobatic, traction kites, KAP, nezvimwe.
Kunyangwe hazvo mavambo avo asina chokwadi, kites dzinofanirwa kunge dzakazvarwa muChina anopfuura makore 2.500 XNUMX apfuura. Kune ngano dzinoverengeka nezve kwayakatangira: ngowani yemushenjere inotakurwa nemhepo, seiri yechikepe kana pamwe basa remuzivi Mo Ti, akavaka kiti muchimiro cheshiri yaive ichibhururuka kwemazuva matatu. seshiri
Ichokwadi ndechekuti kubhururuka kites kwaive chiitiko chekufungisisa chevaChinese. Asi, pamusoro peizvi zvekuvaraidza kana zvekushandisa zvechitendero, kiti dzaishandiswa - sezvavaizoitawo kuPolynesia makore akazotevera- sehembe dzekuredza, vachisunga chirauro nehoiti kukiti yakazoburitswa muchikepe, uchichenjerera kuisa mudziyo padanho rakaringana kubva pamumvuri wakakandwa nechikepe kunyengera hove.
MaChinese akawanawo zvikumbiro zvemauto kuchinhu ichi, izvo zvinogona kunge zvichibva pakusaina panhandare yehondo, kuyera chinhambwe kumusasa wakakombwa uye, kunyangwe, mune zvimwe zvinyorwa zvinonzi paive nevarume vaibhururuka muzvinhu izvi pamusoro pemaguta akakombwa.
Iyo kiti inowedzera kubva kuChina munzvimbo yayo yese yesimba; saka, inowoneka muSoutheast Asia nyika dzakadai seKorea, Malay Archipelago, Indonesia neBurma, uye zvakare muJapan neIndia. Hazvizivikanwe kuti iko kuwedzera uku kwakaitika riini, asi kana zvingangoitika munzvimbo pfupi, sezvo kiti ichangotanga kupararira muPolynesia, ichizivikanwa sekumabvazuva seIsita Island. Saizvozvo, kuburikidza neIndia, inosvika kumadokero kuArabia Peninsula neNorth Africa.
MuEurope, kiti yaizivikanwa zana ramakore rechiXNUMX risati rasvika nenzira nhatu: kupinda kweMongolia, nzira dzekutengeserana kuburikidza neCape yeGood Hope nekutaurirana nenyika dzechiArabhu. Nhoroondo yekuEurope yekiti inotanga neaya anonzi maDracos kana shato dzakaumbwa shato dzedutu idzo dzakashandiswa semabhanhire mumazuva ekupedzisira ehumambo hweRoma. Izvi zvinhu zvaive nesirinda, ine muromo wakakura saga yaive nechitarisiko sedhiragoni kana imwe mhuka inonakidza uye yaipfekwa yakasungirirwa pamusoro wedanda. Sezvayakazadza nemhepo yakazvimba, ichirovera mumhepo pamusoro pevatasvi vemabhiza muhondo. Chinangwa chayo chaive chekukonzeresa kutya muvengi muhondo uye kuita sechishongo kana peni iyo yaibvumidza vanopfura kuti vazive mafambiro emhepo.
Pakutanga kwezana ramakore regumi nemana, tsananguro yakadzama yekiti yakaita sedhiraga inoonekwa mumagwaro akasiyana siyana enguva iyoyo, senge bhuku raConrad Kieser pane tekinoroji yemauto Bellefortis (1405) kana mune zvinyorwa zve1430 zvakachengetedzwa muVienna. Asi iko kumagumo ezana regumi nenomwe zana apo kiti inova inozivikanwa kwazvo muEurope, kunyange ichiganhurirwa kuvana, sekutandadza kana kuita mafireworks. Simba rayo resainzi rakanga risingazivikanwe kusvika muzana ramakore gumi nemasere, kunze kwekumwe kuyedzwa kusina kunyorwa naIsaac Newton pamajometri maficha emakiti maumbirwo. Mumwe musayendisiti akayedza makometi aive Benjamin Franklin uyo, pazuva rine dutu muna Chikumi 1752, aiita bvunzo nemagetsi. Paakasimudza "kiti yemagetsi" yake mudenga nekiyi yakasungirirwa patambo, akaona kuti magetsi akaburitswa, izvo zvakamutendera kuti aratidze hunhu hwemheni uye ndokuzogadzira tsvimbo yemheni.
Zvisinei nezvakaitika izvi, makiti aisashandiswa nguva dzose kusimudza zviridzwa mukucherechedzwa kwemamiriro ekunze kusvika muzana ramakore rechi1891. Kubva panguva ino zvigadzirwa zvaWilliam A. Eddy (1894) naL.Hargrave (XNUMX), iyo yaimiririra shanduko maererano nekushandisa kwayo mukudzidza kwemuchadenga. Yekutanga yaigadzira yakajairika mhando kiti netambo yakaumbwa kuita dihedral angle, iyo yaibvumira kuti ibhururuke isina muswe; kiti yechipiri yaive yemativi-matatu chimiro chine mabhokisi maviri akabatanidzwa kune rimwe nerimwe nemipendero yakavhurika.
Mukupera kwema1903 uye kutanga kwezana ramakumi maviri, zvichienderana nekusimudzira kwendege, masisitimu akagadzirwa nechinangwa chemauto kusimudza vacherechedzi munhandare yehondo. Idzi dzaive nezvitima zvekiti hombe dzaive dzakaturikwa tswanda, kubva kukiti kana tambo, yekuisa mucherechedzi. Vakanga vari kunyanya kana zvishoma kubudirira, asi pakupedzisira mabhaluni ainyanya kushanda. Sisitimu yaive nemikana yakawanda kwazvo, yakagamuchirwa kunyangwe neBritish Navy nemauto, ndiyo yaishandisa kiti yakarongedzwa neyaipayona nendege Samuel Franklin Cody (XNUMX), iyo yaive nemaviri maseru maviri eHargrave akasungirirwa kune mumwe nemumwe uye akapa angular mapapiro.
Mumakore gumi ekutanga ezana ramakore rechimakumi maviri, Alexander Graham Bell akaedza nemakiti kugadzira muchina unobhururuka unogona kugadzirwa. Akavaka makometi makuru akaumbwa nenhamba huru yemasero emetrahedral. Muna 1907 akavaka rimwe remasero mazana matatu nemakumi matatu ane matatu ane makumi matatu nemapfumbamwe ane makumi matatu nematatu, ayo, achizvuzvurudzwa ne steamboat, akasimuka makumi mashanu emamita pamusoro pevhu. Dzimwe dzimba huru dze tetrahedral, dzakashongedzwa nemotokari, hadzina kupa zvaidiwa mhedzisiro, saka, muna 3.393, akasarudza kuzvipira kune zvimwe zviitiko.
Mushure meChipiri Hondo Yenyika, mainjiniya weAmerica Francis Rogallo akagadzira kiti yakavhura nzira yechimiro chitsva chinozivikanwa se semi-shanduka, chinozivikanwa nekuwana chimiro chayo nekuda kwekubatanidzwa kwechiito chemhepo uye nehurongwa hwematanhatu matanhatu. NASA yakafarira zano raRogallo, iro raakaronga kushandisa sepaschute mukudzokazve kwemuchadenga makapisi. Ikozvino hang hangers uye maviri-mutsara stunt kites mhedzisiro miviri yekuferefeta uku.
Muna 1963, American Domina C. Jalbert akafuridzirwa nebapiro renhandare yake kugadzira kite inoshanduka (parafoil) yaive nezvakanaka zvese zvemitemo yemuchadenga yemapapiro akaomarara, nekuti kiti yaisada tsvimbo, uye ikazadzisa chimiro uye kuomarara kwekubhururuka nenzira yemabhegi emukati akafemerwa nemhepo, izvo zvakapa iyo chimiro chemapapiro kugadzikana kukuru uye simba guru rekusimudza.
Mazuva ano kuoneka kwemaviri, matatu uye mana-waya stunt kites uye traction kites zvakuita kuti zvizivikanwe semutambo uye kunakidza.
Maitiro ekugadzira yakagadzirirwa imba prismatic kite
Kana iwe uchida chirongwa chekuita vhiki ino. Isu tawana akateedzana emavhidhiyo mashanu ayo ivo vanotsanangura danho nedanho zvakadzama maitiro ekugadzira "prismatic" kite
Iyo krisimasi kiti ine hwaro hutatu, uye pakuvaka kwayo tinoshandisa mashanga echimiro uye mapepa enyama.
Tinotanga ne zvishandiso zvinodiwa kugadzira kiti.
Nzira yekugadzira plastiki kite
Isita iri kusvika uye setsika dzese vana, uye kwete kudaro vana vanozoda kubhururuka imwe ... Ramba uchiverenga
Maitiro ekugadzira echinyakare yakagadzirirwa kumba kite
Isita yapfuura, nguva iyo kiti iri risingazivikanwe mambokadzi uye uko vanasekuru vanochengeta ... Ramba uchiverenga
Bhuruu - Vana Pepa Kite
Ticharatidza sei kuvaka pepa kiti yakapusa, yakanakira kuti zvidiki zviitwe, kungave kumba kana mumusangano.
Ndizvo zve nyuchi gadzirwa na Nile Velez
Kiti ishizha repepa reA3 rakapetwa kaviri, rakasungirirwa uye tambo yekusonesa yakasungirirwa uye yakagadzirira kubhururuka.
Saka zvakanaka, kuve nemamaki pazvinodiwa kuti zvive zvakakosha, kupa machira kuvana kuti vakwanise kutora mufananidzo uye kana vapedza kuisungirira nekutamba nayo.
Kana iwe uri kuverenga izvi zvichave zvirizvo nekuti watenga imwe. Ndine hurombo. Iwe wakanganisa zvakafanana neni, asi ... Ramba uchiverenga
Musiyano uripo pakati pemhepo nemhepo
Kazhinji tinotaura nezvemhepo nemhepo zvichichinjana, sekunge zvakafanana. Asi izvi hazvisi izvo… Ramba uchiverenga